Allgedo.com » Ha qaadina wadadii 1997-2000 Mas’uuliyiinta Gedo iyo shacabkow – By Maxamuud Sheekh Xasan Aw Cali (Soofe).
Ha qaadina wadadii 1997-2000 Mas’uuliyiinta Gedo iyo shacabkow – By Maxamuud Sheekh Xasan Aw Cali (Soofe).
Print here| By: allgedo.com: Sunday, February 17, 2013 // 6 Jawaabood
Walaalyaal waxaa xaqiiqa ah haddii masuuliyiinta Jubooyinka, gaar ahaan kuwa Gedo aysan muujin midnimo, talaasul iyo in danta guud wax walbo laga hor mariyo, waxaa hubaal ah in aan la gaari doonin nabad, xasilooni iyo maamul ka hana qaado deegaankeena.
Sida aan ku cadeeyay maqaal aan qoray 2011 oo uu cinwaankiisu ahaa “Hujuumka gu’ga iyo haraaga abaarta”, waxaan waligey in badan ka baqayay in ay is khilaafaan saraakiisha ka howl gasho gobalka Gedo, mas’uuliyiinta gobolka Gedo in ay ku kala xirmaan wadamada deriska ah, iyo siyaasiyiin Soomaali ah oo aan gobalka u dhalan, arinkaana uu keeno in ugu danbeyntii dhalinta qori la’isugu dhiibo oo colaad sokeeye oo aad u xun ay ka dhacdo gobolka Gedo. Dhacdada noocaa ah horay ayay u dhacday oo shacabka reer Gedo waa soo martay, waase in wax laga barto oo aan lagu noqon.
Mas’uuliyiinta kala jooga Ceel-waaq, Garbahaarey, Doolow, Kismaayo iyo Muqdisho ee aan isku mawqifka ahayn waa calaamad aan wanaagsanayn. Ciidamada gobalka ku sugan oo aan lahayn hogaan midaysan waa arin muujin karta khatar soo socota. Sidoo kalena, salaadhiinta gobalka oo aan laftooda midnimo iyo guurti dhaqan midna lahayn waa arin loo baahan yahay in lagu baraarugo.
Walaalyaal, intii aanu isku maqnayn waa nalaku maqnaa. Micnuhu waa in cadowgeenu ay fursad u tahay in ay colaad ina dhex marto. Kale duwanaanshaha fikirka waa wax caadi ah, waxaase wanaagsan in mar walbo la ilaaliyo midnimada iyo masaalixda guud ee shacabkeena. Guud ahaan shacabka Gedo, gaar ahaan siyaasiyiinta waxaa la gudboon in ay gacmaha is qabsadaan. Karaamadeena, sharafteena, nabadeena, iyo horumarkeena waxaa soo celin kara midnimo siyaasadeed, midnimo dhaqan iyo mid bulsho.
W.Q. Maxamuud Sheekh Xasan Aw Cali (Soofe).
6 Jawaabood " Ha qaadina wadadii 1997-2000 Mas’uuliyiinta Gedo iyo shacabkow – By Maxamuud Sheekh Xasan Aw Cali (Soofe). "
Asc wr wbr Dhamaan rer Gedo, rer gedow waxaan layabay nasiib darada kuhaysato? hadda dad baa dhihi anagaa rag u ah gobalka caqli aan dagal ahayna umahayan. 1991 kadib gobalka nabad buu noqday rag alitixaad ladhaha maamulayay siba sibay dhantoo nabad baa lahelay, carruurta dugsiyo wax barashay helen, agoontana kuleejyo, hasocotee rag aan qeyr qabin oo jaadki lagaxayiraa amxaaro sookaxaystay oo kuxasuuqey shacabki, habaxasuuqeene, maxay talo uhayan, umadan marka laxasuuqo, yaa kafala qadaya nabada gobalka iyo amnigaba oo mas uul iyo maamul looga kaladanbeya noqonaya?Gobalka wax magarato ayay gacanta ugashay aan aqoon lahayn o shaati qabil kusoqatay darajada , waayo nin aqoon iyo maskax leh ba dadkisa malaayo lamadilen cabdinuur oo dhaqtar aha lamadilen neero oo dhaqtar aha lamadilen ragbadan oo aqoon lahaa wilki tulo barwaaqo lagudilay ee Ushaqeynayay hadada ragbadan bay rer gedo iska cunen wardad kan haddaysa dhalinyarada usokicin wa ayax dad mahan wlh caqliga 5jirka kujirana kuma jiro waxa hor boodaya gobalkan musiibada heshey Odey dhaqamed maleh ugas maleh wax kacelinaya na maleh moryan hadad isqabsatan waa gobal jahilin degen yihin oorag nabad iyo maamul udabalaba lahayn bal eega putnlad ximan iyo xeb oo cabaudwaq kudhegen xita gdagal kamadhaco shacab koodey kala bad badiyen nasiib daro rer gedo iyo cw
maxamuud waa cubtan email kaga maxad ugu qoriwaysay webka,
waad kumahad santahay qoralkan waa in aad noqotaa ururka madaxa midnimada iyo nabada gobalka gedo iyo Cw ba madama ay oday dhaqameed keenii danta ka seexden waa in dhalin yarada badashaa wadan kastaba dhalin tisa maskax yo xoog ba galiya caliban isku mel jognaye tel inmamahayo email in kamahayo wana kasoguray meshad igu ogaydene i so xiriri igunasalan
caabudwaaq boy says:
maashallaah aad baan maqaalkaaga ula dhacay bro adigoo kale yaa mareexaan u baahanyahay runti waa wax aad looga murugoodo meesha ay marexaan maanta yaalaan hoogaan maleh nin hogaamiye ah oo laga dambeeyo maleh gado,kismayo,caabudwaaq meel ay ku mideysan yihiin ma jirto cajiib meel loo raaco maleh maxaa sabab u ah ma soomaalida kale baan ka liidanaa?
Mohamed Abdi Hashi says:
Mahadsanid walaal, Mohamud, waxa aad ka hadleyso waa wax jiro oo waaqici ah, marka kuwii ku baraarugo allah hanaga dhigo, Amiin,,,,,,,,,,,, Amiin
suldaan nuur says:
Asc walaal runti waxaad nin ilaahy garansiiyay kala daadsanaasha haysata beesha sade meelkasta oo ay joogan. Runtii waxaan u baanahay dad maskaxdoodu shaqayso oou adeega danta guud ee beesha sade. Deegaankasta oo ay ku noolyihiin. Bal u fiirso gobolka gedo waa goblolka kaliya ee soomaaliya ka maro labo wabi afar degmo oo ka mid ah iyo beled xaawo oo uu wax yar u jiro iyo sadex xad , border, oo laga aruurin karo canshuur dadka deeganka wax loogu qaban karo. Daaqa xoolaha noolna u sii dheer yahay. Hadana dadkii gobolka dilootay gaajo iyo horimarla,aan marka walaalayaal waxaan idiinkula talinayaa inaad dhulka iska qaadaan oo aad yeelataan hogaan siyaasadeed iyo mid dhaqan oo loo dhanyahay. Walaal ninka soo qoray dhambaalkan haka daalin wacyigalinta beesha sade. Wabilaahi towfiiq
Wu mahdsanyahay walalka .wa in danaha guud laga hormariya tan khaska ah .arintasna wey kubadantey madaxda rer sade. Wayo adaysanjirin arintas maxa horumar ah on gaarnay 50 sannon xurninada heysanay? Wax ha lafahmo .waxan mareyn 21 cenjery .